Slackware 14: တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန် | Linux မှ
DMoZ | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Slackware လောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်နိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပါးသောကြောင့်အနည်းဆုံးအခြေခံအယူအဆများကိုဤအံ့သြဖွယ်ဖြန့်ဖြူးမှုတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ရှင်းပြသည့်ဆောင်းပါးတွဲများကိုရေးသားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အချို့တို့သိကြသည့်အတိုင်းပထမအရစ်ကျမှာအမည်ရှိရာထူးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ Slackware 14: အနဂါး Down, Slack ၏ငါ့အတွေ့အကြုံများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအတိုချုပ်မျှဝေရှိရာ။
အောက်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် installation လမ်းညွှန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည် Slackware ကိုတီထွင် ငါတို့အသင်းကို
Slackware သင့်ရဲ့သွားရ တရားဝင်ဆိုဒ်ဒီလမ်းညွှန်ဟာ DVD ဗားရှင်းကိုအခြေခံထားတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်သောအခါပထမဆုံးမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကြိုဆိုလိုသောနေရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဆန္ဒရှိပါက kernel configuration အတွက် parameters များကိုတောင်းဆိုသည်။ ဤလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်အရကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ "Enter" မည်သည့်အပိုဒေတာထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ။
သင်သတ်မှတ်လိုလျှင် ကီးဘုတ် layout installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအမျိုးအစားကာလအတွင်းသုံးစွဲဖို့ "1" အတွက် configuration menu ကိုဝင်ရောက်ဖို့
ကျနော်တို့ option ကိုရှေးခယျြ "Qwerty / es.map"
စွန့်လွှတ်ရန်ကျနော်တို့ကိုနှိပ်ပါ "Enter" လွိုင် "1" y « Enter » အသစ်
ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ပါ como "Root"
ငါတို့လုပ်ရမည် အခန်းကန့်များဖန်တီးပါ ကျနော်တို့ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ရှိရာ disk ကို၏ တပ်ဆင်ဤလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် root အခန်းကန့် (/) နှင့် swap partition ကို။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ system ထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသော disk များကိုစာရိုက်ခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးသည် "Fdisk -l"
ကျွန်ုပ်တို့၏ disk တည်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် partitioning လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစာရိုက်ခြင်းဖြင့်စတင်သည် "Cfdisk / dev / sda"ထို့ကြောင့် interface ကိုရယူသုံး cfdisk ပါ
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ် swap partition ကို, ဤအဘို့ငါတို့ option ကိုရွေးပါ [အသစ်]
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် option ကိုရွေးပါ [အဓိက]
ငါတို့ရွေးချယ်သည် အရွယ် ငါတို့လိုချင်တာငါတို့ ကားဟောင်းများလဲလှယ်ရေး, ငါ့ကိစ္စမှာတော့ "512"
အခုငါတို့ဆုံးဖြတ်ရမယ် လဲလှယ်ရေးနေရာ အခန်းကန့်သစ်ပင်ရှိ၊ [အစ]
ထို option ကို အသုံးပြု၍ partition အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သည် [အမျိုးအစား]
ကျနော်တို့ကအမျိုးအစား partition ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြ "Linux လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်", ဒီအဘို့ငါတို့နှိပ် "Enter"
ဖန်တီးရန်အချိန် root အခန်းကန့် (/).
ကျနော်တို့ option ကိုရွေးချယ်ပါ [အသစ်]
ကျန်တဲ့ disk space ကိုကျနော်တို့ခွဲဝေချထားလိုက်တယ် "Enter"
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းကန့်အသစ်ကိုမှတ်သားသည် boot option ကိုရွေးချယ်ခြင်း [bootable]ကျနော်တို့အပိုင်းကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ် "အလံများ" အဖြစ်မှတ်သားပါလိမ့်မည် "Boot"
option ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ partition table သို့ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းသည် [ရေးရန်]
သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ရိုက်တာလားလို့မေးတယ် “ အင်း”
ငါတို့ခွဲထုတ်အလုပ်ရှိတယ် နိဂုံးချုပ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ option ကိုရွေးပါ [ထွက်သည်] မျက်နှာပြင်မှထွက်ရန် cfdisk ပါ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ console သို့ပြန်သွားပါ။
configuration screen ကိုကြည့်ရှုရန်ရိုက်ထည့်ပါ တည်ဆောက်သည်
အမှန်တကယ်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မည်သည့်နေရာတွင် configure လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစာရင်းကိုပြလိမ့်မည်
ကျနော်တို့ဒီမှာန်းကျင်ပြုကြလိမ့်မည်ပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်၏ လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် partition ကိုသက်ဝင် ယခင်ကဖန်တီး, ငါတို့ option ကိုရွေးပါ "ADDSWAP"
ငါတို့ဖန်တီးထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ <OK> ဆက်ရန်
စစ်ဆင်ရေးအောင်မြင်ကြောင်းနှင့်အခန်းကန့်ကို fstab သို့ထည့်သွင်းကြောင်းအတည်ပြုသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ <OK> ဆက်ရန်
အခုအလှည့်ပဲ ကို select အခန်းကဏ္။ အမြစ် (/) အရာကျွန်တော်သုံးပြီးဖန်တီးသောအခြား partition ကိုဖြစ်ပါတယ် cfdisk ပါကျနော်တို့ကိုရှေးခယျြ <ရွေးချယ်ပါ
ငါတို့ရွေး "ပုံစံ" partition တစ်ခု filesystem assign ရန် အမြစ် (/)
ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အခန်းကန့်သည် fstab သို့ထည့်သွင်းကြောင်းဖော်ပြသည့်အတည်ပြုမျက်နှာပြင်ပြလိမ့်မည်။ <OK> ဆက်ရန်
package များကိုမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်မည်ကို၎င်းကဤလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည် "Slackware CD သို့မဟုတ် DVD မှတပ်ဆင်ပါ"
ငါတို့လိုချင်လားလို့သူမေးတယ် installation media (CD / DVD) ကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေသည်။ သို့မဟုတ်လိုလျှင် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သတ်မှတ်ပါ, ငါတို့အမှု၌ငါတို့သည်ရွေးချယ်ပါ "ကား"
ယခုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည့် package များကိုရွေးချယ်ရမည်။ option ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည် "KDEI အတွက်နိုင်ငံတကာဘာသာစကားအထောက်အပံ့"၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုနေရာ ချ၍ space bar ကို နှိပ်၍ KDE ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားအတွက်အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။
အခုငါတို့ကိုမေးတယ် ရွေးချယ်ကြရအောင် entre ခုနစျပါးဖြစ်နိုင်သော installation ကိုနည်းလမ်းများ, သင်ရွေးချယ်စရာများစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် "အပြည့်"
ဤ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်ယခင်ကရွေးချယ်သော packages များ၏။ ဒါကကော်ဖီကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပေးမယ့်အချက်ပါပဲ။
installation လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ bootable USB တစ်ခုဖန်တီးလိုပါသလားဟုမေးလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုရွေးသည်။ "ကျော်ပါ"
LILO တပ်ဆင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ထို option ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် "ရိုးရှင်း"
ကျနော်တို့ကတင်ပြလိမ့်မည်ရှိရာမျက်နှာပြင် resolution ကိုရွေးချယ်ပါ Lilo၎င်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မသိပါသို့မဟုတ်စာရင်းထဲတွင်မပါ ၀ င်ပါကထိုရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် "စံ"
kernel အတွက် parameter တွေထပ်ထည့်တယ်။ <OK> ဆက်ရန်
ငါတို့လိုချင်လားမေးကြည့်ပါ ပါဝင်သည် ထောက်ပံ့ UTF-8 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ console မှာရွေးချယ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်
ဘယ်နေရာမှာထားချင်တယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်တယ် Liloဤအမှု၌ငါတို့သည် option ကိုရွေးပါ "MBR"
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ mouse ကိုအသုံးပြုလိုသော driver ကိုရွေးချယ်သည် "Imps2" အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုထို option သည်
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ copy ကို paste လုပ်ရန် copy နှင့် paste ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ mouse ကိုမေးလိုသည် ဟုတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် network configuration ကိုလုပ်ဆောင်လိုသလားဟုမေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် ဟုတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Host အတွက်နာမည်ထည့်ပါ
ဒိုမိန်းအမည်ကိုတောင်းပါ၊ «။ » skip ရန်
ကျနော်တို့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါ ငါတို့ရလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့၏ IPအများဆုံးကိစ္စများတွင်ဖြစ်လိမ့်မည် "DHCP"
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ပံ့ပိုးပေးသူများသည် DHCP ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အမည်များကိုသုံးကြသော်လည်းများသောအားဖြင့်ဤအရာသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ <OK> ဆက်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုစတင်ပါကဆောင်ရွက်ပေးမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပါသည်။ <OK> ဆက်ရန်
console အတွက်အရင်းအမြစ်များကို configure လုပ်မလားမေးသည် <No>
ငါတို့ရဲ့အချိန်ဇုန်ကိုရွေးချယ်တယ် "အမေရိက / မက္ကစီကို_City"
ငါတို့ရွေးချယ်သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင် ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်မည်သည်ကိုအသုံးပြုလိုပါသနည်း။ KDE, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုရွေးပါ "Xinitrc.kde"
အသုံးပြုသူကသတိပေးသည် ROOT လျှို့ဝှက်နံပါတ် မရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့တ ဦး တည်းထည့်လိုသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် ဟုတ်ပါတယ်
ကျနော်တို့စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းနှိပ်ပါ « Enter » ဆက်ရန်
ငါတို့မှာရှိတယ် installation လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူပြီးဆုံး ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုချက်ကိုပြသထားသည်။ <OK> ဆက်ရန်
ငါ configuration လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဘယ်မှာမျက်နှာပြင်ပြန်သွားကျနော်တို့ကို select လုပ်ပါ "ထွက်ပေါက်" ထဲကရရန် တည်ဆောက်သည်
loading ပြီးတာနဲ့ command line ကိုရောက်လိမ့်မယ် "Startx" အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ဖို့
အဆင်သင့် !!! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Slackware ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။
ဒါကဖြစ်ပါသည် Slackware တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြီးမားသောဗဟုသုတမလိုအပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Slackware 14: တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
127 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် elav !!! ...
ငါပြောခဲ့သလိုပဲအဲဒါဟာအသုံး ၀ င်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သို့သော်ရလဒ် = D ကိုကျေနပ်ပါစေ ...
Slackers, Cheers ကိုတွေ့ရခဲသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်တာက၊ မင်းပြောနိုင်ရင်ငါ post ကိုသိမ်းဖို့နည်းလမ်း (တစ်ခုရှိလျှင်)၊ ငါကြိုက်တာငါကြိုက်တယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီမှာအသစ်ဖြစ်နေတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ် ရွှင်လန်း!
ငါလမ်းညွှန်ကိုပထမဆုံးတောင်းခဲ့တဲ့သူပါ၊ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာအခန်း (၂) ခုမှ (၃) ခုထည့်သွင်းထားသော Slack ကိုပိုမိုထိရောက်စွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ (သို့) လစျြလြူရှုမှုမရှိခြင်း၊ ဒုတိယ၊ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖွင့်ရန် inittab ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်မလွယ်ကူခြင်း။
အကြောင်းပြချက်မရှိပါ =) ...
ဒါဟာ / အဘို့အဘို့အပိုဆောင်း partition ကိုဖန်တီးရန်အမြဲအကြံပြုသည်, ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ဒီလမ်းညွှန်သာပြတ်သားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမ ...
သေချာတာပေါ့၊ inittab ကိုတည်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်လာမယ့်ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမကြာခဏပေါ်ထွက်လာဖို့မလွယ်ကူပါဘူး ...
Slackware - ယောက်ျားများအတွက်စနစ်။ ။ ခက်ခဲသည်။ ရှင်းလင်းစွာသည်းခံခြင်းနှင့်နည်းပြစာအုပ်ကောင်းကောင်းဖတ်ခြင်း၊ ကောင်းစွာသုတေသနပြုခြင်းတို့သည်ပြyouနာမရှိဘဲတပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုကိုသင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ live dvd ကိုစတင်ပြီး test installation လုပ်တဲ့အခါ၊ နှစ်ရက်အကြာမှာvoiléပါ။
အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြထားတယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါတို့ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ windows တွေထက်ပိုများတဲ့ငါတို့အတွက် !!
ယခင်စာသားနှင့်ဤအတူတူပင်ဤဖြန့်ဖြူးမှုကိုဝန်းရံနေသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်သည်၊ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတော်လေးရိုးရှင်းသည်၊ သံသယမဖြစ်စေရန်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်မျက်နှာပြင်များကိုယူပါ ဖန်သားပြင်အရေအတွက်သည်သင်တပ်ဆင်ရန်အချိန်ပမာဏနှင့်အချိုးမကျကြောင်းသင်နားလည်သောလုပ်ငန်းစဉ် ...
Debian ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ငါဟာအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောနေတာလား။ xDDD
တည်းဖြတ်သည် သငျသညျ macho ခံစားရလျှင် LFS xDDD ကိုသွားပါ
LFS နဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာက Suse နဲ့ပါ။ ငါပြန် install လုပ်နေတုန်းပဲ !! ဟားဟား !!!
MY PERSONAL LIKE Debian သည်တာလီဘန်များလွန်းနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်အားအကြိမ်ပေါင်းများစွာကယ်တင်ခြင်းရခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့် ASUS EEEPC နှင့် 512 ram နှင့် 2GB SSD တို့ဖြင့် Debian ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကလှူဒါန်းမှုကြောင့် Squezze နှင့် Lxde တို့သည်စားပွဲခုံနှင့် voila အနေဖြင့်၊ ကျောင်း ၂၀ အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသောကွန်ပျူတာ ၂၀ ။
အခြား distro တပ်ဆင်ထားပြီးသုံးစွဲသူများအတွက် GRUB သည် bootloader အနေဖြင့်မည်သည့်အကြံပြုချက်များကိုသတိထားသင့်သနည်း။ ဥပမာ Grub2 နှင့် Ubuntu ။
LILO ကို install လုပ်စဉ် MBR မှ grub ကိုမဖျက်ရန် Ubuntu ၏ "sudo update-grub2" တွင် "skip" ထားသင့်သလား။
အတိအကျဆိုရလျှင်၎င်းသည် "ရိုးရှင်းသော" (သို့) "ကျွမ်းကျင်သူ" အစား "skip" option ကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏ GRUB ကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့် LILO ထည့်သွင်းခြင်းကိုကျော်သွားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသမျှအကောင်းဆုံး Slackware တပ်ဆင်ခြင်းလက်စွဲဖြစ်သည်။
= D မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးထည့်သွင်းခဲ့သည့်အချိန်နှင့်ထပ်တူနီးပါးရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကျွန်တော်စိတ်ထိခိုက်မိသည်။ slackware အားဖြင့်အချိန်မလွန်။ ၎င်းသည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ဆဲဖြစ်သည်။
ဒီလူကိုထည့်သွင်းဖို့တိုက်တွန်းထားလားကြည့်ရအောင်။ ဒါဟာ Arch ထက်မခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်မှာ၊ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ များသောအားဖြင့်ကိရိယာများ၏ဆင့်ကဲတိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
installation လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များသည် Arch ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ၊ သူတို့သည် ပို၍ ရိုးရှင်းပါသည်။ =) ...
Linux ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြင့်သင်ခန်းစာများနည်းပါးသောကြောင့် Ubuntu, Debian နှင့်ယခု Slackware တို့မှခုန်ထွက်လာသည့်အခါလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်လိုအပ်ခဲ့သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုချီးကျူးပါသည်ယခုအချိန်တွင်သင်သည် slackware ကြိုးစားချင်သောသူတို့အဘို့မဖြစ်မနေဖတ်ပါလိမ့်မည်။ ခင်ဗျားကဗွီဒီယိုကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတပ်ဆင်မှုကိုထောက်ခံချင်တယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော့်ကော်ဖီအိုးကိုလိုချင်ရင်ကော်ပီသုံးပြီးပုံနှိပ်ထုတ်ပါ၊ လက်တော့ပ်ကိုသုံးပါ။
Slackware အကြောင်းရေးသားရန်ကျွန်ုပ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားတွင်သတင်းအချက်အလက်နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤ disc ပေါ်ရှိအကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်အခြားလမ်းညွှန်များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် (အခြားအရာများအနက် xD) တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည့် PDF ဗားရှင်းတစ်ခုတွင်တပ်ဆင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုရရှိရန်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး ဂုဏ်ယူပါတယ် !! ကျွန်ုပ်၏ iso ကို torrent ဖြင့် download ချသောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန် (၁၁ နာရီဆိုလျှင်…… xD)
ငါ slack လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးပါပြီ, ထိုသို့အိမ်မှာရေးသားဖို့ဘာမှကဲ့သို့မထင်ခဲ့, ထို့ထက်ပို။ AIF ကိုမပါဘဲ arch ထက်ပိုမိုလွယ်ကူ: D. (ပြီးတော့ငါဆိုလို)
ငါသတိပြုမိသောအရာတစ်ခုမှာလမ်းညွှန်ကို KDE ပေါ်တွင် desktop တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် parameters များကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသည် (ထောက်ပြရန်ဖြစ်သည်)
ငါဆက်ပြောနေတယ်ဆိုတာသံသယရှိတယ်၊ slack ထဲမှာပါတဲ့ package တွေဟာ debian တွေထက်မကြာသေးခင်ကမှလား။
ထို့ကြောင့်ညအချိန်တွင် torrent ကိုစွန့်ခွာသင့်သည်။ နံနက်အချိန်၌ xD အသီးများစုဆောင်းနိုင်သည်။
တကယ်တော့ installation လုပ်ငန်းစဉ်ဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဗဟုသုတသိပ်မလိုအပ်လှဘူး၊ ဒီလမ်းညွှန်ကိုလိုက်နာပြီးအရှုံးမရှိဘူးလို့ငါယုံကြည်တယ်။
ဟုတ်သည်၊ ဤလမ်းညွှန်သည် KDE အတွက်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်တပ်ဆင်စဉ်ကာလအတွင်းသင့်လျော်သော package များကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသော desktop သို့မဟုတ် WM ကိုသတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သည်။
သင်၏မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်သည် Debian ကိုသိပ်မသိသောကြောင့်မည်သို့ဖြေဆိုရမည်ကိုမသိပါ။ သို့သော်သင်သည်လက်ရှိဌာနခွဲကိုရွေးချယ်ပါကသင့်တွင်လက်ရှိ packet များပါလိမ့်မည်။ သင် install လုပ်ထားသော package များကိုအမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
ပြန်ကြားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုပါ၊ သင်၏လမ်းညွှန်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူးစက်စေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်၌ရှိသော hard disk ၌စမ်းသပ်ရန်၊ iso ကိုစတင် download လုပ်၍ စတင်ခဲ့ပါသည်။ DMoZ ^^ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Slackware, "foul" kde 4.8.5 က install လုပ်ပြီး၊ debian တွင်စမ်းသပ်နေပြီး slackware အသစ်များကိုသင်ရလိုပါကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
@helena_ryuu Gnome သည် Slackware မှငါသိသလောက်ဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဗားရှင်း ၁၄ တွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းရှိမရှိမသေချာပါ။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို desktop environment တစ်ခုအတွက်သီးခြားထည့်သွင်းရန်အတွက် third-party alternates များရှိသေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဤကဲ့သို့သော: Dropline
နှစ်ဆပို့စ်ကိုတင်ပါ။ ငါပြောချင်သည်မှာ - အထူးသဖြင့်အရေးအသားပတ်ဝန်းကျင်ကိုတပ်ဆင်ရန် Dropline ကဲ့သို့အခြားနည်းလမ်းများရှိသည် - http://www.droplinegnome.net/
ကောင်းတာကအဲဒါက DVD ပဲ၊ အနည်းဆုံးတော့ MB သိပ်မဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့မရဘူး ၊( အနည်းဆုံး install ကိုသုံးပါ။
Gentoo သို့မဟုတ် Slackware တစ်ခုခုကိုပါ
ကောင်းမွန်တဲ့သင်ခန်းစာ LILO ကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါကတခြားဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာတွေမှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။
အခြား post (မှတ်ချက်ရေးသည့်အချိန်) တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည့် Gentoo နှင့်စပ်လျဉ်း။ TWM နှင့်အတူ openbox သို့မဟုတ် xfce ကိုသုံးပါက Gnome3သို့မဟုတ် KDE ထက်ထည့်သွင်းရန် ပို၍ မြန်သည်။
အိုးသခင်၊ ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ် XD မီးထွန်းတော့မည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်ကောင်းပါတယ်၊ ငါ ၃ ရက်လောက်စောင့်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီဟာကစောင့်ဆိုင်းခြင်းရဲ့အကျိုးကိုငါထင်တယ်။ Virtual တွင်စမ်းသပ်ခြင်း ဤကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အကောင်းဆုံးရှိပြီးသားပတ်ဝန်းကျင်။
ငါက slackware ကြိုးစားရန်အလွန်သွေးဆောင်ခံခဲ့ရသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးဆောင်းပါးအတွက် ^ _ ^ လမ်းညွှန်အလွန်တန်ဖိုးထားသည်, ဖြစ်ကောင်း, များစွာသောကဲ့သို့ငါဒီ distro အဖြစ်ခက်ခဲစဉ်းစားပေမယ့်ငါ Distrowatch သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာငါမကြိုက်ဘူးတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်၏ ၎င်းသည်၎င်းအားလှိမ့်ချပေးနေသောအရာမဟုတ်ပါ၊ မဟုတ်ပါက၎င်းကိုကြိုးစားရန်သွေးဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးများထဲသို့ထည့်ပါ့မည်။
Rolling Release မဟုတ်ရင်တောင်မှအခွင့်အရေးယူပါ။ Arch ကနေလာတာ၊ ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Slack နဲ့စတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းခိုဖို့စဉ်းစားမိသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ရိုးရိုးလေး၊ ကျွန်ုပ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင် WiFi ဖြစ်ပါကမည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း၊ ဆက်သွယ်မှုသည်အခြားအိမ်မှလာသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပျောက်နေသည်။
အလွန်ကောင်းတဲ့အထိန်း, ငါကအတော်လေးအသုံးဝင်သောကြောင့်ငါစောင့်ရှောက်မည်။ ကျွန်ုပ် install လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံး install လုပ်သည့် အချိန်မှစ၍ ဗားရှင်း ၇ မှ (ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုသော Linux distro ဖြစ်သည့်အတွက်) ကျွန်ုပ်၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်များစွာပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းသင်သိပါသည်။
ဒီအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကမင်းသတိရစေဖို့ငါ install လုပ်တယ်။ လေးစားပါတယ်
Hehehe က XD တည်ရှိခဲ့တဲ့ပထမဟာသေချာပါတယ်။
Slackware သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ တည်ရှိခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုခဲ့သည့် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗားရှင်း ၄.၀ တွင်၊ ၃.၅ B floppy disk အမြောက်အများကို 1995MB သို့ download လုပ်ယူရသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတော်လေး odyssey ခဲ့ပေမယ့်သူကတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထည့်သွင်းခဲ့သော super equipment သည် 1999DX4.0 (နောက်ဆုံးထုတ်စီးရီး) ဖြစ်ပြီး 3.5 Mhz Toshiba Pentium II MMX လက်ပ်တော့နှင့်စီဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်စျေးကြီးသောကြောင့်လက်ပ်တော့သာ floppy drive ရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါပက်ထရစ် (ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်သူတီထွင်သူ) သည်ဘာကြောင့် ၇ သို့ခုန်။ (၅ နှင့် ၆ မတည်ရှိသည်) ကိုမွမ်းမံသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
နည်းပြဆရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလက်တွေ့ကျနဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပက်ထရစ်သည်၎င်း၏ distro နှင့်ပတ်သက်သောသူ၏တည်ရှိမှု (unix အရသာရှိသော linux၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်) နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ပြောဆိုထားသည်။
ထိုအချိန်တွင် kaldera နှင့်အခြားသူများလည်း Debian အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ (version 2.1 slink တွင်၊ Suse linux (ယနေ့ opensuse) သည်ဗားရှင်း ၆.၃ တွင်တည်ရှိသည်။ linux distros အများအပြားမရှိတော့ပါ။ homer 6.3 ဒါပေမယ့်တစ်ခါမှမတပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ Slackware ထက်ပိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ် (ရယ်စရာမဟုတ်လား။ ဒါကငါလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ distro ဖြစ်လို့) ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါဟာငါချစ်ခင်တွယ်တာတဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်အထူးချစ်ခင်တွယ်တာစရာကောင်းတယ်။
လူအများဟာဒီ Slackware ပို့စ်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာကိုကြိုက်တယ်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည် GNU / Linux အတွက်လူအများဆွဲဆောင်သောဖြန့်ဖြူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်သည်တိုင်အောင်၊
သင်သိ, ငါတစ်ခုခု, အဖြစ်ငါ install လုပ်ရှိရာပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
မကြာသေးမီက LINUX နှင့် FEDORA 17 တို့ကိုစတင်စလေ့လာခဲ့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် distro များစွာရှိသည့်အတွက် ubuntu၊ open suse, sabayon ကို download လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး FEDORA 17 ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်လိုက်ရင် ISO ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်။ ထိုသို့တည်ရှိပင်မသိခဲ့ပါ။ ငါအရမ်းသိချင်တယ်။ ငါဂရပ်ဖစ်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ထိုအရာအားလုံးမှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်လေ့ရှိသော်လည်းဤသင်ခန်းစာကိုတွေ့မြင်ပါကကြိုးစားမည်။ ငါအသစ်သောအမှုအရာနှင့်အခြားကွန်ပျူတာကြိုးစားရန်ကြိုက်တယ်။ သင့်မှာကွန်ပျူတာဗဟုသုတသိပ်မရှိရင်တောင်
Fedora FTW! ဟုတ်ပါတယ်၊ RPM ရဲ့အမေ ... တချို့ကသူက RedHat guinea ဝက်ပဲလို့ဆိုပေမယ့်ငါဟာ "ဈေးပေါတဲ့" RHT လိုင်စင်တွေအတွက်ပေးရတာထက် guinea ဝက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ငါ desktop ပေါ်မှာလေးစားသည် GNOME3ပြောင်းလဲမှုသည်အနည်းငယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဗားရှင်း ၃ ခုနှင့် (F3 beta သည်တစ်ပတ်အတွင်းထွက်လာသည်) သူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သည်၊ အနည်းဆုံး GNOME Shell သည်ငါ့အတွက်အဆင်ပြေသည် (ဟုတ်ကဲ့၊ KDE ထက်ပိုကောင်းတယ်။ 😛
အရမ်းကောင်းတဲ့လမ်းညွှန်၊ ဒီတနင်္ဂနွေကိုငါရှာမယ့်လမ်းညွှန်နဲ့အတူ install လုပ်တော့မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုနှိပ်ရင် Enter ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အမှားရမိတယ်။ “ ဒီ kernel မှာအောက်ဖော်ပြပါအချက်များမလိုအပ်ပါ။ စီပီယူ:
boot မလုပ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ CPU နှင့်သင့်လျော်သော kernel ကိုသုံးပါ။ »
PC ပေါ်မှာရော virtual machine မှာပါ
VirtualBox တွင် Configuration -> System -> Processor ကို -> PAE / NX ကို Enable လုပ်ပါ
အတိအကျဆိုရလျှင်ထိုအငြင်းပွားဖွယ်ရွေးချယ်စရာသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများစွာဖြစ်ပေါ်စေပြီး Ubuntu ကဲ့သို့ PAE extension လိုအပ်သော system များတပ်ဆင်ရန် ၄ င်းကို activate လုပ်ရန်လိုအပ်သည်အထိကျွန်ုပ်သိသည်။ 😛
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !! ငါကြည့်မယ်
ဝိုး !! အလွန်ကောင်းတဲ့ installation လမ်းညွှန် !! 🙂
ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းအမျိုးအစားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိနေသောကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်ဒဏ္sာရီများကိုဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောသူငယ်ချင်းလမ်းညွှန်။
ဆောင်းပါးကောင်း ဒါဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖြန့်ဖြူးမှုကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့အများကြီးကိုအားပေးစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကတခြားသူတွေလောက်မပြောတတ်ပါဘူး။
လက်ခုပ်သံများ !!! အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး .. Excellent ကငါပြောလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းငါဒီနေ့နှင့်အတူရလိမ့်မယ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ mouse သည် usb ဖြစ်ပါက mouse configuration အပိုင်းတွင် usb option ကိုအသုံးပြုပါသလား။
တကယ်တော့မလိုအပ်ပါဘူး။ Kernel ကိုယ်တိုင်တွင်ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့ရှိတယ်၊ လမ်းညွှန်ထဲမှာမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်း installation ကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့သင့် USB မောက်စ်အလုပ်လုပ်နေ ဦး မှာပါ။
ခဏတာငါ partitions တွေကိုဖန်တီးဖို့ fdisk ကိုသုံးမယ်လို့ငါထင်တယ်။
စိတ်ကူးကဒီလမ်းညွှန်ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းအောင်လုပ်ဖို့၊ fdisk xD အသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်ချန်လှပ်ခဲ့တယ်။
ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်! တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာ၊ ဂရပ်ဖစ်စနစ်ကိုအလိုအလျောက်မဝင်ရောက်ပါနှင့်။ http://archninfa.blogspot.com.es/2012/11/guia-de-instalacion-slackware-140.html
ထိုကဏ္ section ကိုတမင်တကာချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီးယခုဘလော့ဂ်တွင်လည်းရရှိနိုင်သောစီးရီးရှိနောက်ပို့စ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
မေးခွန်းမေးခွန်း - မင်းမှာ Gentoo ကရှိလား။ Gentoo တွင် graphical environment ရှိပါသလားသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းရှိပါသလား။
Gentoo တပ်ဆင်မှုသည် console မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်၊ သင်အခြေပြုစနစ်တပ်ဆင်ပြီးပါက desktop ပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်သော WM ကိုထည့်နိုင်သည်။
Sabayon သည် Gentoo အခြေပြုဖြန့်ဖြူးခြင်းခံရသော်လည်းသုံးစွဲသူနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးရန်ဖြစ်သည်။
ပထမတော့ LINUX အောက်မှာ OS နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဂူဂဲလ်မှာသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ FEDORA, UBUNTU, OPENSUSE, DEBIAN စသည်တို့ရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့အံ့သြသွားတယ်။ ဘာလို့ဒီလောက်များရတာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။ ငါက Windows ကိုသုံးနေတုန်း Fedora ကနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ် Fedora၊ Ubuntu၊ opensuse ဆိုတာမျိုးပေါ့။ windows 95, 98 2000, XP, Vista,7လိုမျိုးဆိုလိုတာပါ။ အခု windows 8 ။
ထို့နောက်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါက၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးများနှင့်မတူကြောင်းသတိပြုမိသည်။
ဒါပေမယ့်အခုတော့ LINUX distro နည်းနည်းပြောတာသိပ်မများတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြောတာနည်းတာကိုသိရလို့ကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ်။ ငါအစပိုင်းမှာငါဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကိုကတည်းကအင်တာနက်ပေါ်မှာအများဆုံးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသူများဖြစ်ကြ၏။ ဒါပေမယ့်ဒီပို့စ်မှာဒီနေရာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ Slackware ဆိုတာငါ့ကို ISO ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။
LINUX အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဘလော့ဂ်တွင်စာရင်းသွင်းထားခဲ့ပြီးယခုတစ်ရက်တွင် ZORIN OS6ဟုခေါ်သောနောက်ထပ် distro တစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ version6ဖြစ်ပြီး OS များစွာရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ သူတို့ကဒီ Distro Zorin ကိုပြတင်းပေါက်များမှအသစ်များသူများအတွက်အကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၌ FEDORA 17 ရှိပြီး yum အကြောင်းနှင့်အစီအစဉ်များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုလေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ အခြေခံများပေမယ့်ပိုပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအစနှင့်နှိုင်းယှဉ်။
6-bit မှာ ၁.၄ gb နှင့် ၆၄ ဘစ်အတွက် ၁.၅ gb ဖြစ်သော ZORIN 32 ၏ ISO ကိုလျှော့ချမည်
ငါ့ကိုလိမ်သည်မှာသူတို့က "ပေးဆောင်သော" ဗားရှင်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းဖြင့်ပြောခြင်းကမှန်တယ်၊ ဒါကလှူဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀ မှ ၁၅ ယူရိုနှင့်သင်္ဘောတင်ပို့သည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းအရ၎င်းသည်ဂိမ်းများ၊ စာရင်းကိုင်အသေးစားများအတွက်ပရိုဂရမ်များကဲ့သို့သောရွေးချယ်စရာအမြောက်အများကိုယူဆောင်လာသည်။ အဲဒီ့စာရင်းကိုင်ပရိုဂရမ်လေးဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာသိဖို့ကျွန်တော်ဒီကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်သေးပါဘူး။ ဒီမှာသူတို့ကသူတို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုကိုကမ်းလှမ်းပြောကြပါတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကမည်မျှတည်ငြိမ်မှုရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်ဤ Zorin distro ကိုတစ်စုံတစ်ယောက် install လုပ်ထားလျှင်ဖြစ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။
နှင့်အခမဲ့ version ကို download လုပ်ပါ http://zorin-os.com/free.html
မိသားစုကိုကြိုဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ငါ Fedora 17 ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် yum ရှိနေတာမို့ program တွေကို install လုပ်တဲ့နေရာမှာ distro တစ်ခုချင်းစီကိုသုံးတယ်။ ရုံပြောပါ။
လူသိနည်းသည့် Slackware!? ကောင်းပြီ၊ Windows သုံးစွဲသူများအကြားဤအရာသည်အနည်းငယ်သာသိသည်။ GNU / Linux world Slackware သည်ဘုရားသခင်နှင့်တူသည် (အကယ်၍ ဘုရားသခင်တည်ရှိခဲ့လျှင်) ။
Slackware နှင့် Debian သည် GNU / Linux ၏ဘိုးဘေးများဖြစ်သည်။ အခြား distros များအားလုံးနောက်မှရောက်လာသည်
"အဆင်သင့် !!! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Slackware ကို install လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီ။
NetworkManager သည် o_O လုံးဝအလုပ်မဖြစ်ဟုထင်ရသည်
Slack တွင်စပိန်ဘာသာဖြင့် wiki ရှိပါကသင်ဤစာမူကိုထည့်သွင်းပါ😉
သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါက NM ကို execute permissions ပေးဖို့လိုအပ်တယ်၊ ဒါကို root အနေနဲ့လုပ်ကြည့်ပါ။
chmod + x ကို /etc/rc.d/rc.networkmanager
ရိုဒရီဂို Salva ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်၊ မင်းကငါ့ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့မင်းခွင့်ပြုမှာလားသူငယ်ချင်းတချို့နဲ့အတူ Linux နဲ့သူ့ရဲ့ကွဲပြားတဲ့ဖြန့်ချီမှု၊ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်အားပေးနေတယ်။
Rodrigo Salva ကိုပြန်ပို့ပါ
ဝက်များကို desdelinux.net သို့ပေးလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမှတ်ထားပါ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ desdelinux.net ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လမ်းညွှန်သည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုအချိန်မီဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၊ တပ်ဆင်ပြီးနောက်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါစတင်သည်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူများ, အစဉ်အလာ distros အပေါ်တစ် ဦး ပန်ကာဖွင့်လှစ်ကြောင်းယုံကြည်, ငါသည်ဤကြီးမားသောအားထုတ်မှုအပေါ်သင်သာဂုဏ်ပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ
ဟုတ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာခက်ခဲတဲ့ Slackware နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကများစွာသောသူတို့သည်ဆက်မသွားရန်ဆုံးဖြတ်ကြသောကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ပျက်အားလျော့စေရန်ဤစီးရီးများဖြင့်ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါကျန်ရှိနေသေးသောအတွေးဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကြယ်တွေညှိတဲ့အခါမှာဒီမှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ...
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအသုံးပြုရာတွင်အလွန်အလိုလိုသိမြင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် application များကိုတပ်ဆင်ရန်မည်မျှလွယ်ကူသည်၊ ခက်ခဲသည်နှင့်မည်မျှကျယ်ပြန့်သည်ကိုမသိသောကြောင့်ဤ distro မှကျွန်ုပ်အားဘယ်သောအခါမျှအားမပေးခဲ့ပါ။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ operating system ဆိုတာကွန်ပျူတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ slakware နဲ့အတူ application တစ်ခုထက်ပိုပြီး compile လုပ်ရမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ငါထင်တာကတော့ကျော်ကြားတဲ့ slakware တည်ငြိမ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးတဲ့တစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Debian testing မှာငါမှာလည်းတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်။ compile လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်။
ငါမြင်ရလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒီစက်ကို virtual machine တစ်ခုမှာစမ်းချင်တယ်။
တကယ်တော့ဒါဟာဒဏ္myာရီဆန်ဆန် distro တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ packets တွေ install လုပ်ခြင်း (ကိုင်တွယ်ခြင်း) ၏မတူညီသောနည်းလမ်းများကိုရှင်းပြသည့်ဆောင်းပါးအချို့တွင်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာစနစ်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်သောကိရိယာများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမျှစုဆောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ကြောက်ရွံ့စရာမလိုဘဲအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်သည် XFCE ကို desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအဖြစ် install လုပ်ပြီးပြီ။ အရာရာတိုင်းဟာကောင်းမွန်နေပါပြီ။ ယခု မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ configurations နှင့် themes များနှင့်လည်းရေးသားမည်။
မင်္ဂလာပါ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လမ်းညွှန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် virtual machine တွင် 'test' လုပ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကူးယူပြီး၎င်းသည်သေးငယ်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုပြုပြင်သောအခါ (၎င်းတွင်နည်းနည်းရှိသည်) နှင့်၎င်းသည် virtual (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်မှာလာသည်) KDE desktop နှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုပယ်ဖျက်ပြီးထွက်ခွာပါ။ Xfce ။ ရလဒ်ကဘာလဲဆိုတာသိသလား။ xinitrc.xfce ကိုသင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ပြသတဲ့အတိုင်းရွေးဖို့ရွေးစရာအချိန်ငါဘယ်တုန်းကမှမပေါ်လာဘူး။ ဒါကြောင့်ငါအသစ်စက်စက် system ကိုစတင်ပေမယ့်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘဲငါ Xfce ဘာမျှမရှိသည်။ 32 bit version 14 CD image ကိုသုံးပါ။
ဒီအချက်ကိုမင်းရဲ့လမ်းညွှန်ထဲမှာသိရင်ဒါမှမဟုတ်ဖြေရှင်းချင်ရင်မင်းအကြောင်းပြောပြမယ်။ ငါ KDE ကိုရည်ညွှန်းသောအရာကိုရွေးချယ်ဖို့မလိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်ပျက်အများအပြားရှိလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ အခု xfce ကိုသူ့ရဲ့ package manager (ငါတစ်ခါမှမသုံးဖူးတဲ့) နဲ့ repos နဲ့ဘယ်လိုထားလဲဆိုတာကြည့်နေတုန်းပဲ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
PS: ဒီနေရာမှာသင်အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် installation package ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးပြီးပုံမှန်အားဖြင့်မထားခဲ့ပါနဲ့။ (ဒီအဆင့်မှာ software အားလုံးကို DVD မှ install လုပ်ရန်ကြေငြာချက်ပါရှိသည်) ။ သို့သော် installation ကိုယခုစမ်းသပ်ရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ hehe
ကျေးဇူးတင်ရုံတင်ရပါ။ Linux လောကတွင်စတင်သူများအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဤ blog ကိုကြီးထွားရန်မျှော်လင့်သည်။ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အမြတ်အစွန်း ၂၀၁၃ ကိုလိုချင်သည်။
PS Slackware 14 ကို VirtualBox တွင် Macbook တွင်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သည်။
မေးခွန်းတစ်ခုကိုမရယ်ပါနဲ့။ ဒါပေမယ့်ငါ windows တွေနဲ့အတူဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ဇနီးမှာဆိုက်ဘာရှိပြီးငါကသူ့ရဲ့ "၀ င်းဒိုး" တွေကိုမပြုပြင်ဘဲသူမရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကိုထည့်ချင်တယ်။ ဆိုလိုတာက LILO အဆင့်မှာဘာလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ linux ကိုအချိန်အတော်ကြာသုံးခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူး။ Ubuntu, Joli OS, Puppy စသဖြင့်သိပေမယ့်နောက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းချင်တယ်။
သင်ဤဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာများကို YouTube တွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်မှာဤဖြစ်စဉ်ကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်သင်ခန်းစာများစွာရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ငါ့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိခဲ့တယ် =)
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကမှ DMoZ အလွန်ကောင်းမွန်သော post ကို x11tete11x က Gentoo ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားအားပေးခဲ့ပြီး Vbox တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မှတ်ဉာဏ်နည်းပါးသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Slackware ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေး ဦး မည်။ ငါပြီးသား Vbox ကိုအပေါ်ဗားရှင်း 12 နှင့် Arch နှစ် ဦး စလုံး install လုပ်ထားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဒီဒဏ္systemာရီစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံကြောင့်ငါ Slack ကိုပိုပြီးသဘောကျတယ်။ ISO ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုပိုမိုထုတ်ယူနိုင်ရန် hard disk partition တွင်ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ငါ 64-bit အတွက်သုံးမယ်၊ ဒါအတွက် Vbox ကိုထည့်လိုက်တယ်၊ ဒီ Funtoo မှာ၊ ZFS filesystem နဲ့အဲဒါကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ တစ်ခုမှာ GNU / Linux လောကတွင်သင်ယူခြင်းကိုဘယ်တော့မှရပ်တန့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤရေးသားချက်များကြောင့်အသုံးပြုသူအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်အခက်အခဲနည်းပါးခြင်းတို့ဖြင့်ရရှိသည်။ နောက်တဖန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သင်ခန်းစာ။
ကျွန်ုပ်သည် Fedora 18 တွင်ရှိနေပါပြီ။ ဤသင်ခန်းစာကြောင့် Slackware 14.0 64 bits ကို virtual machine ပေါ်တွင် install လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ငါ kde 4.8.5 ကိုအပြည့်အဝမတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းလည်းရှိသည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပြင်ပမွမ်းမံခြင်းများကိုအဆုံးသတ်ရန်ငါရည်ရွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Xfce 4.10 ကိုအသုံးပြုရန်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ ငါထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များအနက်; V.2.5 4.0, Libreoffice XNUMX, Xine, Uplayer ။ မင်္ဂလာပါ
ငါကောင်းတဲ့လက်စွဲငါကွဲပြားတဲ့ distros install လုပ်ပြီးပေမယ့် Slackware ငါ့ကိုခေါင်းကိုက်ပေးသောတစျခုဖွစျသညျ။
Slackware 14 ကို Virtual Box တွင်တင်သည့်တင်ဆက်မှုများ (၃၂ - ၆၄) ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်၍ မရပါ။
သတိပြုရန် -“ ဒီ kernel ဟာ CPU မှာမရှိတဲ့အောက်ပါအင်္ဂါရပ်တွေလိုအပ်တယ်။ pae
boot မလုပ်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ CPU နှင့်သင့်လျော်သော kernel ကိုသုံးပါ။ "
အောက်ပါ "Configuration -> System -> Processor -> Enable PAE / NX" လုပ်ပြီးသွားပြီ။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုအိမ်၌ပြcomputerနာမရှိဘဲတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်း Virtual Box တွင်အခြားကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသောအခါမူ ... mmm ... ဗားရှင်း ၁၃.၃၇ နှင့်ထပ်တူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
VictorHenry သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော hardware emulation ဖြစ်သော QEMU ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသည်။ သင့်မှာ hardware virtualization VT အထောက်အပံ့မရှိပါက 64-bit တစ်ခုသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိူင်ပါ။ VBware သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသည် 64-bit ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Virtualbox သည်အလုပ်မလုပ်ဟုထင်ရသည်။ Slackware 64 bits ရှိတဲ့ VBox မှာ opensuse 64 bits ကိုကျွန်တော် install လုပ်လို့မရပါဘူး။ qemu နဲ့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင် qian-system-x32_64 ရွေးစရာနဲ့အတူ Debian wheezy 86 bits (သို့) Slack 64 bits မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါက၊ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးဆုံးမှာကျန်နေသည်
-WiFi ဖွဲ့စည်းမှု 02: 00.0 ကွန်ယက်ထိန်းချုပ်မှု: Broadcom Corporation BCM4321 802.11a /b/ g / n (တည်းဖြတ် 03) (ဥပမာ)
-USB အသံဖွဲ့စည်းပုံ (alsa သို့မဟုတ် pulseaudio)
startup မှာ splash -Configuration
- အသံ server တစ်ခု၏ဖွဲ့စည်းမှု (ဂီတကို install လုပ်ရန် jackd ကိုဖန်တီးရန်၊ jack အတွက် Pulse module၊ jack ကိုလုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့အားတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ ပြီးသည့်အခါအရာအားလုံးကိုပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်စေမည်)
- တူညီသောအိပ်စက်ခြင်း / hibernation ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဤအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါ USB sound cards နှင့်ပြproblemsနာများကိုစစ်ဆေးပါ
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းတို့သည်မလိုအပ်သည်ဖြစ်သော်လည်း multimedia ဖျော်ဖြေရေးကိုနှစ်သက်လိုသောသူများအတွက်သို့မဟုတ်အသံကဒ်နှစ်ခုရှိသည့်သူများအတွက်၎င်းတို့သည်မရှိမဖြစ်မဟုတ်သော်လည်းအရာများဖြစ်သည်။
အိုကေကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!! ငါ QEMU ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ငါမဆိုရလဒ်အပေါ်မည်သည့်ရလဒ်မှတ်ချက်ပေး !!!
အဆင်သင့် !!! Slackware 14 (32-bit) ကိုအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီး
ထည့်သွင်းတပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား - VMWare Server 2.0 ဖြင့် Virtualized ။
Host OS: Windows7လုပ်ငန်း။
ငါသိပ်မကြိုက်ဘူး Virtual Machine သုံးတဲ့ RAM ပမာဏ၊ အရာအားလုံးလုံးဝနှေးနေတယ်။
Virtualize အတွက်အခြား software များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အမြင်တွင် VMWare သည် RAM အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်။ သို့သော်မျက်မှန်မရှိသောအခါ၎င်းသည်ပုလင်းထဲမှရေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူသည်။
အခြား virtualizer များ အသုံးပြု၍ ဤ JEWEL distro ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ installation တွင်ကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
Slackware ကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲ။ : /
ကျွန်ုပ် Fedora 18 မှထွက်ခွာပြီး Xfce 64 desktop နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ PC ၏ HD တွင် Slackware14.0 4.1 ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာတကယ်မြန်ဆန်သွား, နောက်တဖန်သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ
slpash ကို boot ပေါ်တင်ထားသလား။ Kernel ကိုပြန်လည်စုစည်းစရာမလိုဘဲလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ Slackware တွင်အပလီကေးရှင်းများကိုမည်သို့တပ်ဆင်ပါသနည်း။ စုစည်းနေသလား။ ဒါမှမဟုတ် Debian / Ubuntu နဲ့ဆင်တူသလား။
သင် Xfce 4.10 ကိုဆိုလိုတာလား အိုအို
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အလွန်ပြည့်စုံပါတယ်။ Partition လုပ်တဲ့အချိန်မှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်။ Type မှာ SWAP partition ကိုဖန်တီးတဲ့အခါ Logical (သို့) Primary ကိုရေးထည့်သလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံတွေထဲမှာ Primary ကိုမင်းတွေ့နိုင်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man, ၎င်းကိုမူလတန်းအဖြစ်ထားခဲ့ပြီးမည်သည့် application များဤကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
မှန်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ခြင်းကို debugged လုပ်ထားပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပါလာတဲ့ kde 3.8.5 desktop ကိုကျွန်တော်လုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ ယခုတွင်အလွန်မြန်ဆန်သွားပြီး Xfce 4.10 ကိုအပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်သည်။ မင်္ဂလာပါ
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ toshiba L305D လက်ပ်တော့ပ်တွင်ထည့်သွင်းရန်ပြproblemနာရှိသည်။ ၎င်းသည် kdei packages များတပ်ဆင်သည့်အခါ၎င်းသည်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ပါကပိတ်ထားသည်။
ငါ Slackware 14 64 bits ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။
ဟုတ်ကဲ့အခု !! အဲဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့။
အလွန်ကြီးကျယ်လှသည်! .. ၎င်းသည်မည်သို့တပ်ဆင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန် see
ငါလိုအပ်သမျှပဲ။ နောက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင် Arch ကိုတပ်ဆင်ခြင်းထက် ပို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
ငါစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက် Slack ကိုငါရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ၎င်းအပြင်အနည်းဆုံးသင့်အားကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် graphical system ကိုကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ startx နှင့်ပြissueနာဖြေရှင်းနေသည်။
ချစ်ခင်ရပါသော Slackware ကိုသုံးသောစပိန်စကားပြောသောအသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်မိကြောင်း၊ သင့်အားပြောရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနီရောင် ဦး ထုပ် ၅.၁ ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ distro များစွာအပြီးတွင်ကြီးမားသောပျင်းရိမှုကိုလက်ခံပြီးနောက်သင်နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်လိုပါသည်။ ဒါဟာ hahaha ငါ့ကိုရှုပ်ထွေးနေသောဖြစ်သောတိကျသောခေါင်းစဉ်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်
ငါအမြဲတမ်းပထမ ဦး ဆုံးဗားရှင်း၏ကုဒ်ကိုရှာဖွေချင်ခဲ့တယ်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျေးဇူးတင်ထက်ပိုပါလျှင်, ငါရှာတွေ့ဘူး!
သင်၏ထင်မြင်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းများအတွက်ဖိုရမ်များသို့ပို့ပေးပါ။http://foro.desdelinux.net/) အမြဲတမ်းသတိထားမိလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီမှာသင့်ရဲ့မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကူညီမည့်အခြားကျွမ်းကျင်သူများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်ကို၎င်းကိုကျောင်းတာဝန်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်တောင်းခံခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းသောကျူရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းမှာတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် login က၎င်းကိုမရေးသွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်အမြစ်ထည့်လိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် login ကိုပြန်လည်စတင်ရန် command အချို့မှားကြောင်းပြောလိုက်သည်။
အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလိုက်နာနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ် install လုပ်သည့် disc ကို အသုံးပြု၍ အဆင်ပြေပါသည်။
Rescatux ကိုဆွဲယူပါ။ ထိုတွင်သင်သည်စကားဝှက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင် Slackware ကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်၊ ဤ link သည်ဒီမှာကျွန်ုပ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကယ်တင်ခဲ့သည်။
ရှောလု VS ဟုသူကပြောသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ post ကိုတွေ့တဲ့အခါဘယ်လောက်တင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါတစ်ယောက်တည်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊
Saul VS သို့ပြန်သွားပါ
အလွန်ကောင်းမွန်သောသင်ခန်းစာ၊ မကြာသေးမီကငါ Debian အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏လက်စွဲကိုဖတ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီသင်ခန်းစာသည် Debian လက်စွဲကိုငြူစူရန်ဘာမှမရှိဘူးဟုပြောရမည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် !!!
အလွန်ကောင်းသောသင်ခန်းစာ, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို C:
ငါ install လုပ်ပြီးသွားအလွန်သင်ခန်းစာကောင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသောသင်ခန်းစာ။ ငါမဆိုပြanyနာမရှိဘဲဤ distro install လုပ်ပါ။ ငါ installation လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတတိယ / အိမ်က partition ကိုဖန်တီးရန်မည်သို့မည်ပုံတွက်ဆဖို့ကျန်ရှိနေပေမယ့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း
ဗားရှင်း ၁၃.၀ ထည့်သွင်းရန်အသုံးပြုသောသူငယ်ချင်းသည် (ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်လိုသည်) အတူတူဖြစ်သည်။ partition (/) နှင့် swap partition (fdisk-l) ဖြင့်ပြုလုပ်သောအချိန်တွင်အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မည် -
- / bin / sh: fdisk-l: မတွေ့ပါ။
ဟေ့သူငယ်ချင်း၊ မေးခွန်းတစ်ခု။ ငါအဲဒါကို USB ကနေ install လုပ်နေတယ်၊ ​​boot ဖိုင်ဟာမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာငါပြောပြတယ်၊ အဲဒါကိုစီဒီကနေ autodetect လုပ်လိုက်တာကိုငါမြင်တယ်။
Raul Muñoz ဟုသူကပြောသည်
အဖွဲ့ ၁ ဟုသူကပြောသည်
သင်၏ slackware တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဤကဲ့သို့အသေးစိတ်မျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်၊ ကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux တွင်အစပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်ခံယူထားဆဲပါ၊ သင်ဝံ့၊ မြစ်ကိုဖြတ်ကူးရမည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤထင်မြင်ချက်မှဒဏ္outာရီထဲမှထွက်လာပြီးအခြားမှတ်ချက်များတွင်၎င်းတို့ install လုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့် အဲဒါကြောင့်ငါမသုံးရဲခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီအံ့မခန်းဖွယ်လမ်းညွှန်နဲ့အတူကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ငါစမ်းသပ်ဖို့ distro ကို install လုပ်မယ် 14.1, ငါအခု Pclinuxos 2013.12 KDE 1.6 GB ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လဲကြည့်ရအောင်၊ ငါ distro ၏ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်။ သင်၏မှတ်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုလက်ခံပါ။
ငါ့ကို Dakstar ရဲ့ login တောင်းတယ်
Cesar Cordova ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးလက်စွဲစာအုပ်သူငယ်ချင်း၊ လှူဒါန်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အတော်လေးလွယ်ကူပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်ကဲ့သို့သောသူများသည်ဗဟုသုတကိုမျှဝေရန်သင်ပေးသောကြောင့်ကောင်းပါသည်။
Cesar Cordova အားပြန်ပြောပါ
ဤစာမျက်နှာတွင် slackware အကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်
အခုငါ့သံသယလာ။ ကွန်ပြူတာနဲ့ GNU / Linux နည်းနည်းတော့မသိဘူး။ Guuxalinex linux mint, trisquel, guadalinex စသည့်ရိုးရှင်းသော distros အချို့ကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အားလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အချက်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များ၏ပမာဏမှာကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာနှေးကွေးလာလျှင်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ Slackware ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဘာတွေပါလာသလဲ။ သူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်သွေးဆောင်တယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဂရမ်တွေမလိုချင်ဘူး။ ငါဖတ်ခဲ့သည့်အတိုင်း Kde သည်အလွန်လေးလံသော desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Kde နဲ့တောင်ဒီဟာမြန်နေသေးတယ်လားဒါမှမဟုတ်ငါ့မှာကွန်ပြူတာဟောင်းရှိရင်ငါတခြား desktop environment တစ်ခုထားသင့်သလား။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစိတ်ကူးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် Trisquel နဲ့ Gnewsense နဲ့စမ်းကြည့်တော့ဗွီဒီယိုနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို flash နဲ့ကြည့်လို့မရဘူး။ Slackware သည်အသုံးပြုသူအများစုမြင်သောအရာကိုတွေ့မြင်နိုင်မည်လား။ ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်က၎င်းသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်စတင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ အခြားဗီဒီယိုနှင့်တေးသီချင်းများနှင့်အချို့သော word processor များဖွင့်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအလုပ်လုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ပျော်ရွှင်မှုထက်ပိုပါလိမ့်မည်။ ဘရောင်ဇာ၊ vlc၊ pdf စာဖတ်သူနှင့်စာလုံးပရိုဆက်ဆာတို့ဖြင့်လာပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်မှာပြတင်းပေါက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်မအောင်မြင်နိုင်သေးပါ။ ငါလမ်းညွှန်ပြောသကဲ့သို့ install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်သလားသို့မဟုတ်အခြားအရာများကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ pc ဟောင်းနွမ်းနေသောကွန်ပျူတာနှင့်သင့်တွင်ကွန်ပျူတာဗဟုသုတနည်းပါးပါကအလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုက lubuntu ကိုကြိုးစားရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့သော Lubuntu သည်ပထမဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတော်တော်များများသိချင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ Slackware ကအဖော်ရွေဆုံးမဟုတ်မှန်းငါသိပေမဲ့လည်းအဲဒါကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာများကိုဆက်ဖတ်ပြီးဆွဲထုတ်ချင်တယ်။
ဒီ distro ကိုအာရုံစိုက်ပြီးဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြီးဆုံးသည်အထိ installation ကိုအဆုံးတိုင်အောင်အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ screen တစ်ခုချင်းစီမှာလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်၊ ​​ငါ reboot လုပ်ပြီး startx ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာပြင်မီးခိုးရောင်ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်လာဘယ်တော့မှ။
PC သည် AMD sempron, MH 1800 MH ဖြစ်ပြီး၊ 512 သိုးထည်ရှိတဲ့အကြောင်း (ငါမှတ်ဥာဏ်ကိုမီးရှို့လိုက်ပြီ၊ ယခုအချိန်တွင်ထိုအရာကိုပစ်ချရမယ်) ။
ဘာကြောင့် Desktop ပေါ်မလာတာလဲ။
သူက ၂ နှစ်ရှိပြီ
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိနှင့်တပ်ဆင်စဉ်ကာလအတွင်း cd / dvd မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်နှင့်ကျွန်ုပ်ချိတ်ဆက်ရန်လိုမလိုသိလိုသည်။
ဒါ့အပြင်အမှန်တရားဟာကျွန်တော့်အတွက်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာငါလုပ်ပေးမယ်။ မင်းဖြေချင်ရင်ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါမယ်။
အလွန်ကောင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်ဒါပေမယ့် install လုပ်သည့်အခါငါဒီရှင်းပြချက်အားလုံးကိုပိတ်ဖို့ရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်ငါဒီရှင်းပြချက်အားလုံးကိုပုံနှိပ်ဖို့ရှိသည် ???
မင်္ဂလာနံနက်ခင်း၌ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ပြaနာတစ်ခုရှိတယ်။ မင်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အကူအညီအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ w7 နဲ့ dual slackware ကို install လုပ်တယ်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် usb keyboard ကနေ ps2 ကိုပြောင်းလိုက်တာက slack မတွေ့ရဘူးလို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာ menuentry ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုဘယ်လိုကူညီရမယ်ဆိုတာငါမသိဘူး၊ နောက်ခြေလှမ်းတွေကိုပြောနိုင်တယ်၊ ငါဟာ slackware တူညီတဲ့ iso ကို install လုပ်ထားပြီးပြီ။ သူငယ်ချင်းရဲ့မှတ်ချက်ကိုငါလိုက်ပေမဲ့ငါရိုက်ထည့်လိုက်တယ်၊ ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကန့်များကိုကြည့်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ င်ရောက်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်သည်ကိုပြန်ပို့ပါကကျွန်ုပ်မှားကြောင်းကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့ပါကစိတ်မကောင်းပါ၊ သို့သော်ဤပြmyနာကိုကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။
Jason Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ! လူအများသိထားရမည့်အချက်များအရ Windows7Ultimate သည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် Microsoft မှ update အသစ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ၎င်းမတိုင်မီ linux 15% သို့ပြောင်းရန်စီစဉ်ထားသည်။ Laptop တစ်လုံးမှာ Fedora 2020 ကိုသုံးတယ်၊ Mini Laptop တစ်ခုမှာ Ubuntu Budgie ကိုသုံးတယ်၊ Slackware ကိုတပ်ဆင်လိုသည်။ သို့သော်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ISO ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည် bootable USB ချောင်းနှစ်ချောင်းဖန်တီးသင့်သည် - တစ်ခုမှာ installation driver နှင့်နောက်တစ်ခု - "source code" ပါသော။ ငါနှစ်ခုလုံးကိုသုံးသင့်သလား။ ငါမှာ Intel Pentium IV ပရိုဆက်ဆာနှင့် Windows Vista ပါသောကွန်ပျူတာရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။